News - Muraayadaha ugu fiican Maalinta Koowaad, jaakadaha, kabaha isboortiga iyo heshiisyada kale ee dharka (2020): Mashiinka hore iyo keydka dharka waxaa soo sheegay Retail Egg
Bandhig Faneedka Dahabka ah ee 2020 ee ragga iyo dumarku hore, dharka iyo kabaha, oo ay ku jiraan jaakadaha sare, kabaha isboortiga, muraayadaha indhaha iyo qiimo dhimis dheeraad ah oo ku saabsan dharka, kabaha iyo qalabka
Raadi habka ugu wanaagsan ee hore, dharka iyo kabaha heshiisyada maalinta Amazon Prime Day, oo ay kujiraan kuwa ugu caansan, kabaha orodka, dharka, jaakadaha, funaanadaha, iyo muraayadaha indhaha. Xiriirinta heshiisyada caanka ah ayaa hoos ku taxan.
Ku keydi ilaa 58% dharka ragga, jaakadaha iyo jaakadaha ka soo jeeda noocyada ugu sarreeya oo ay ka mid yihiin Calvin Klein, The North Face, Carhartt iyo Columbia iibka maalinta Amazon Prime Day
Ku keydi ilaa 42% jaakadaha haweenka, jaakadaha, jaakadaha iyo jaakadaha digirta ee noocyada ugu sarreeya sida The North Face, Steve Madden, Columbia iyo Calvin Klein oo ah dhiirrigelinta maalinta Amazon Prime Day.
Ku keydi 42% Jaakada Haweenka Arcadia II ee Jaakada jaakada sare ee Amazon-Shell oo leh muraayad la hagaajin karo, xarig xarig ah oo la hagaajin karo iyo boorsada gacanta oo la gashado
Ka iibso Jaakada Roobka ee Glennaker Columbia Boy ee Amazon oo keydi ilaa 43% - qolofta nayloon aan biyuhu lahayn waa mid waarta oo u adkeysan karta roobka da'a roobka
Ku keydi 41% Jaakada Ragga ee Ascender Softshell Jacket on Amazon-Waterproof iyo dhogorta Andean dhogorta leh waxaa laga sameeyay 100% polyester
Ku keydi $ 30 doolarka Eddie Bauer Ms. Sun Valley Down Parka oo ku taal Amazon oo laga sameeyay qiimo dhan 650 oo hoos loo dhigay jeebbada jiinyeer-dhogorta leh
Ku keydi ilaa 47% naqshadda qolofta Columbia ee Foldback Waterproof iyo Roobka aan Roobka lahayn
Soo iibso muraayadaha muraayadaha oomanka ah ee Ray-Ban oo ku kaydi 20% Amazon-oo leh looxyo bir ah iyo dahaadhka ilaalinta UV
Ka soo iibso Muraayadaha Muraayadaha Wareegga Ray-Ban Haweenka Amazon oo keydi 30% -waxaa ku jira jir balaastig ah iyo dahaadhka ilaalinta UV
Ku keydi 50% Ray-Ban Blaze Wayfarer muraayadaha indhaha ee Amazon-mid ka mid ah qaababka ugu caansan ee faylka Ray-ban
Soo iibso Muraayadaha Ray-Ban Blaze Double Bridge Square Muraayadaha on Amazon iyo badbaadi 47% -with looxyo biraha laba jibbaaran leh la flat iyo double loox
Ku keydi 26% on Oakley Ragga Holbrook Square Muraayadaha on Amazon-timeless naqshadeynta caadiga ah ku daraya casriga ah Oakley
Iibso Oakley Ragga Flak 2.0 muraayadaha muraayadaha tooska ah ee Amazon oo keydso 32% -wareegaha u adkaysta cadaadiska waa miisaanka fudud oo waara, raaxo leh oo ilaaliya maalinta oo dhan
Ka ilaali $ 73 on Muraayadaha muraayadaha muraayadaha indhaha ee Oakley ee Oakley on Amazon-waalka waa qaab dhismeedka walaac u adkeysanaya, fudeyd iyo adkeysi leh, oo raaxo leh in la xidho maalinta oo dhan
Ka iibso Muraayadaha Muraayadda Duulimaadka Oakley ee Duulimaadka Oakley ee Amazon isla markaana badbaadi 21% -wax ka ilaalinta 100% UV dhammaan UVA, UVB, UVC iyo iftiinka buluug ee halista ah, illaa 400mm
Soo iibso muraayadaha muraayadaha biraha ah ee loo yaqaan 'Oakley Women Split Time' Pilot Pilot on Amazon oo keydso 25% -waxaa lagu xoojiyaa xoojinta iyo dabacsanaanta si looga hor tago wareejinta ama cilladaha
Kaydso $ 81 on Oakley Ragga Mainlink Muraayadaha muraayadaha tooska ah ee Amazon loogu talagalay xaaladaha iftiinka dhalaalaya, taasoo ka dhigaysa bay'addu inay u muuqato mid muuqata oo dabiici ah
Ku keydi ilaa 44% Nike, Adidas, Balance New, ASICS iyo Skechers kabaha iibka ee Amazon Prime Day sale
Ku keydi ilaa 38% kabaha haweenka, kabaha, kabaha dhaadheer iyo kabaha fidsan ee Amazon Prime Day dhiirrigelinta-dhagsii xiriirka si aad u hesho qiimaha ugu dambeeya ee kabaha haweenka, laga bilaabo kabaha socodka ilaa kabaha iyo kabaha
Kaydi ilaa 43% kabaha carruurta ee Amazon Prime Day dhiirrigelinta-badbaadi kabaha kabaha, kabaha, kabaha iyo kabaha kabaha ee wiilasha iyo gabdhaha
Iibso kabo cusub oo dheellitir ah oo ragga ah oo ku yaal Amazon, badbaadi 22% -100% maqaar, barkinta wareega oo dhan
Iibso Fududeeyaha Dumarka Cusub ee Nergize V1 oo ku yaal Amazon, badbaadi 38% -100% fiber synthetic, taageerada naqshadeynta casriga ah
Ku keydi 26% Skechers Ragga Delson Camben Sneakers oo ku yaal Amazon-aan-siibiibix ah, xargaha hore, isboortiga iyo nashaadaadka xilliga firaaqada
Kaydso ASICS Kabaha kabaha ee Jel-Venture Jogging on Amazon-Premium insoles leh adkeysi sare iyo maarayn qoyaan fiican
Iibso Skechers Ladies Go Shoy Walking Shoes on Amazon oo badbaadi 40% - miisaanka fudud oo jilicsan 5Gen barkinta jawaabta
Kaydso 43% on Deer Stags Boys Oxford Shoes on Amazon-Soft, dahaarka mesh adag iyo naqshadeynta wingtip
Ku keydi 44% dharka Fila Women Disruptor II ee ku yaal Amazon oo laga sameeyay maqaar qaali ah oo miisaankiisu hooseeyo
Kaydso kabaha kaydka ah ee ASICS ee kabaha tacaburka ee Amazon-lagu kalsoonaan karo GEL-Venture® 7 taageerada kabaha socodsiinta ayaa ku siin doonta faa'iidooyinka aad ugu baahan tahay orod kasta
Ku keydi 28% Skechers Afterburn xirmooyinka xargaha xarkaha ee loo yaqaan 'Amazon-durable and nylon loop lace' iyo silsilad cirib xiiran iyo carrab si loogu helo raaxo dheeraad ah
Iibso Reebok Mudanayaasha maqaarka caadiga ah ee Harman Run kabaha kaydka ee Amazon oo keydi 23% - kabo yaryar oo casri ah oo leh dhexdhexaad dhexdhexaad ah oo loo yaqaan 'EVA' ayaa bixiya taageero waxayna ku sii socon kartaa socod badan iyo orod
Ku keydi ilaa 25% kabaha Steve Madden ee kabaha Fenta moodada ah ee kabaha Amazon-ka ee “kabaha kabaha caadiga ah” leh cagaha caagga ah, oo lagu heli karo 5 midab oo caadi ah
Ka iibso PUMA Sneakers Dumarka 'PUMA' ee Amazon oo keydi ilaa 42% - kabaha isboorti ee caadiga ah oo laga sameeyay 100% maqaar macmal ah oo leh calaacallo caag ah
Soo Iibso Kabaha Isku-dheelitirka ee Isku-dheelitirka ee Isku-dheelitirka Haweenka ee 608V5 oo isku-dheellitiran oo raaxo leh oo ku yaal Amazon oo kaydso illaa 31% - kabo tababbar leh oo raaxo leh oo leh barkinta wareega
Ku keydi ilaa 32% kabaha Skechers Work Cessnock ee mesh Amazon-neefsan kara iyo xargaha bungee iyo caag aan siibiq ahayn
Ku keydi ilaa 43% ragga Reebok ee maqaar-gacmeedka caadiga ah ee dharka moodada ah ee loo yaqaan 'Amazon-guridda maqaarka iyo isku-darka caagga ah midabka cad iyo ciridka
Iibso Under Armor Kids 'PreSchool Assert 8 Kabo Xidhitaan Kale oo ku yaal Amazon oo keydso ilaa 25% miisaan culus oo raaxo leh, oo leh xargaha iyo xargaha xargaha, fududahay in la xidho oo laga baxo
Ku keydi ilaa 34% dharka ragga iyo moodka maalinta Amazon Prime Day dhiirrigelinta-hubi heshiisyadii ugu dambeeyay ee funaanadaha ragga, dhididka, jaakadaha, jaakadaha, jooniska, surwaalka, gaagaaban, nigiska iyo dharka isboortiga
Ku keydi ilaa 40% dharka dumarka iyo moodka maalinta Amazon Prime Day xayaysiinta-dhagsii xiriirka si aad u hesho macluumaadkii ugu dambeeyay ee ku saabsan dusha sare ee haweenka, funaanadaha, jaakadaha, jaakadaha, dharka, jooniska, surwaalka, goonnada, lebbiska, dharka isboortiga, nigiska, hurdada iyo dharka Dhimista dharka caadiga ah
U keydi ilaa 58% dharka carruurta maalinta Amazon Prime Day dhiirrigelinta-badbaadi jaakadaha, dharka isboortiga, bajaamooyinka iyo nigisyada wiilasha iyo gabdhaha
Soo iibso Wrangler Authentics Ragga raaxada hayalka san dhexda Jean on Amazon oo keydso 20% - caadi ah oo leh suunka fidinta
Ku raaxayso 35% sicir-dhimis ah oo ku saabsan xallinta dimoqraadiyadda haweenka ee Ab ee qaababka jeebka ee loo yaqaan 'Amazon-6' oo jeebka sare ku yaal
Iibso Calvin Klein Haweenka Cotton Bralette Casriga ah ee Amazon oo keydi ilaa 41% -Xirmad isku-dhafan oo cudbi leh oo leh suunka Racerback
Soo iibso jiinis maqaar sare leh oo dumarka Levi ah oo ku yaal Amazon oo badbaadi 40% -saga sare dhexda oo hoos uga dhig miskaha iyo bowdyaha
Badbaadinta illaa 51% adoo iibsanaya funaanad caan ah oo ragga ah oo ah 'T-shirt' oo ku taal Amazon-oo leh astaamaha C ee gacanta bidix
Ku keydi ilaa 33% Levi's Gabdhaha Jeexitaanka Dumarka ee caadiga ah ee Amazon-fadhiiso dhexda oo si fudud ugu dhaaf miskaha iyo bowdyaha
Ku keydi ilaa 41% saraakiishii dhididka dhejiska ragga ee Champion-ka ee Amazon-dhogorta ayaa laga dacweeyay bannaanka oo aad bay u jilicsan tahay gudaha
Ka iibso shaati-gacmeedka dareeraha taabashada dareeraha ragga ee Calvin Klein Amazon si aad u keydiso ilaa 62% -waxay leedahay difaac UV waxaana lagu miiqay dun aad u fiican si loo bixiyo hawo iyo neefsasho
Ku keydi ilaa 52% faahfaahinta qoorta ee 'Amazon's Champion Women Powerblend Boyfriend Crew-V-neck at the neckline and stylish sleeves hands
Ma waxaad raadineysaa kabo caan ah oo aad loogu baahan yahay, dharka iyo dalabyada moodada ah? Halkan guji si aad uga baaraandegto dhammaan xulashooyinka macaamil ee ku jira bogga “Prime Day” ee Amazon.
Dhiirrigelinta Maalinta Dahabiga ah waxay socotaa oo keliya waqti xaddidan. Egg Retail wuxuu kasbadaa komishannada wax iibsiyada lagu sameeyay iskuxirka la bixiyay.
Munaasabada sanadlaha ah ee 'Amazon Day Prime' oo dhacda dukaamaysiga waxay socotaa 48 saacadood, iyadoo la siinayo keyd fara badan oo kumanaan ah noocyada ugu sarreeya.
Ma lihid xubin Amazon Prime ah? Ku billow tijaabo bilaash ah oo 30-maalmood ah oo ka faa'iideyso dhammaan dardargelinta Maalinta Koowaad.
Waxaad badbaadin kartaa lacag badan inta lagu jiro Maalinta Koowaad, sida jaakadaha, dharka xagaaga, dusha sare iyo funaanadaha, kabaha isboortiga ee moodada ah, kabaha isboortiga iyo qalabka (sida saacadaha iyo muraayadaha indhaha). Haddii aad raadineysid kabo, dhar ama muraayado, Amazon waxay ku dhowdahay inay daboosho baahiyahaaga. Qeybta moodada haweenka, waxaad ka heli doontaa dhar badan, kabo iyo qalab kala duwan. SL Fashions iyo BTBFM waa qaar ka mid ah noocyada badan ee bixiya dhar kala duwan munaasabadaha kala duwan. Tusaale ahaan, dharka loo yaqaan 'SL Fashions' tuxedos waxay aad ugu habboon yihiin xafladaha caadiga ah, xafladaha xafiisyada, xafladaha is biirsaday, aroosyada, iwm. Qalabka kale sida muraayadaha indhaha, shandadaha gacanta iyo saacadaha ayaa sidoo kale la siiyaa.
Qeybta labiska ragga, waxaad sidoo kale kaheli doontaa xulashooyin kaladuwan dharka, dahabka, kabaha iyo agabka. Laga soo bilaabo kabaha isboortiga ilaa kabaha, rootida ilaa kabaha, qof walbaa wuu leeyahay. Haddii aad raadineyso kabo tayo sare leh, markaa Adidas, Lacoste, Sperry iyo Tommy Hilfiger ayaa ka mid ah. Adidas ragga kabaha waaweyn ee maxkamadaha waxay leeyihiin quruxda caadiga ah ee adidas, iyaga oo ka dhigaya kuwo isku mid ah.
Amazon waxay qabatay dhacdadeedii ugu weyneyd ee dukaameysiga ilaa maalinta Ra'iisul Wasaaraha sanadkii hore. Xubnaha ra'iisul wasaaraha waxay ku raaxeysan karaan in kabadan hal milyan oo qiimo dhimis khaas ah.
Ma u baahan tahay dhar rag iyo dumarba leh, kabo iyo badeecado mooddo ah? Halkan guji si aad uga baaraandegto dhammaan xulashada heshiiska bogga dhiirrigelinta “Maalinta Koowaad” ee Amazon.
Ku saabsan Ukunta Tafaariiqda: Egg Tafaariiqda waxay wadaagaan wararka ku saabsan macaamil ganacsi e-commerce. Adiga oo xubin ka ah Amazon Associate Retail Egg, waxaad ku kasban kartaa dakhli iibsiyo u qalma. Qofka lala xiriirayo: Andy Mathews (andy@nicelynetwork.com)
Xisaabiye San Francisco ah ayaa ka hadlay ahmiyadda maamulka Biden ay u leeyihiin gundhigyada maalgashiga wadahadal kasta oo lala yeesho macaamiisha.
Isticmaalayaasha aan amar ka dalban meel kasta oo ka mid ah JD waxay heli karaan rasiidh qiimo dhimis ah! Kaarkaaga Fiisaha, guji si aad ugu bixiso JD.com markii ugu horreysay oo aad ugu raaxeysatid qiimo dhimis!
Shirkadda ayaa sheegtay in Lee Kun-hee, oo shirkadda Samsung Electronics ka dhistay shirkad weyn oo caalami ah oo isugu jirta taleefannada gacanta, semiconductors iyo TVs, ayaa dhintay Axaddii ka dib markii la dhigay isbitaal muddo ka badan lix sano wadna xanuun wadnaha qabtay Axaddii. Lee waa 78 jir sanadkan. Wuxuu horumariyey Samsung Group oo noqday shirkadda ugu weyn ee Kuuriyada Koofureed wuxuuna noqday ninka ugu taajirsan South Korea. Jeong Sun-, oo ah agaasimaha guud ee shirkadda cilmi baarista ee Chaebul.com, ayaa yiri: “Lee koritaanka cajiibka ah ee Kuuriya iyo sida Kuuriyada Koofureed ay ugu milmayso caalamiyeynta waa mid astaan ​​u ah geeridiisa inbadan oo reer Korea ah ayaa xusi doonta.
Harry Markopolos (Harry Markopolos), oo ah xirfadle hore oo deris ah oo u jeestay baadhitaan madax-bannaan oo musuqmaasuq maaliyadeed, ayaa helay qorshaha $ 65 bilyan ee Bernie Madoff Ponzi, laakiin waa la iska indhatiray SEC muddo sagaal sano ah. Maadaama uu yahay nin si cad u dhaleeceeya xakameeyayaasha Mareykanka, Harry wuxuu hadda u arkaa goobta hanti dhowrka iyo warshadaha caymiska inay tahay kiiska ugu weyn ee musuqmaasuq maaliyadeed ee soo socda.
Kaarka Visa, waxaad ku raaxeysan kartaa illaa 20% qiimo dhimis ah oo aad kaga adeeganayso Global Trends Department Store! Fiiri dallacsiinta ugu dambeysa ee dukaamada casriga ee internetka sida Mytheresa iyo Giglio.com!
Microsoft, Apple, Alphabet, Facebook, Amazon, AMD, Caterpillar, Comcast, GE, Ford, Pfixer, Visa, UPS, Exxon Mobil, Twitter iyo shirkado kale ayaa ka warbixiyay natiijadooda rubuc saddexaad.
Way fududahay in la iibsado saamiyada, laakiin way adag tahay in la iibsado saamiyada saxda ah iyada oo aan la istaraatiijiyad waqti-tijaabin ah. Marka, waa maxay keydka ugufiican ee la iibsado ama la geliyo liiska daawashada hadda?
Suuqa saamiyada waxaa la socon kara hogaamiyaasha sida Microsoft iyo Tesla. Markii ay soo dhowaadeen doorashooyinkii iyo kiisaska coronavirus-ka oo kordhay, tani waxay ahayd usbuucan dakhliga ugu badan.
Si dhakhso ah ugu deeqo si aad u taageerto hay'adda qaxootiga ee Qaramada Midoobay, si ay qaxootigu u helaan xirmooyinka degdegga ah ee lagula tacaali karo xilli roobaadka ugana badbaadin lahaayeen musiibada!
Istaraatiijiyad maalgashi kee baa tijaabisay waqtiga? Maalgashiga kobaca. Khubarada Wall Street waxay aaminsan yihiin in saamiyada leh rajada koritaanka xad dhaafka ahi ay muujinayaan qaar ka mid ah saamiyada ugu adag. Awooddaas koritaan waxay ka baxsan tahay heerka ugu dhow, iyo magacyadan waxay gaari doonaan soo celin la taaban karo sannadka 2020 iyo wixii ka dambeeya. Taasi waxay tidhi, si aan udhaho uguyaraan, helitaanka saamiyada kudhacda qaybtaan waxay noqon kartaa caqabad. Falanqeeyayaashu waxay aaminsan yihiin in hal istiraatiijiyad ay tahay in dib loo qaado, dib loo eego sawirka weyn, diiradda la saaro shirkadaha leh koritaanka muddada-dheer ee ku saleysan guulaha la taaban karo ee sannad-ka-taariikhda ah. Iyadoo tan maskaxda lagu hayo, waxaan u adeegsanay TipRanks 'database si aan u ogaano seddex kayd oo koritaan ah oo ay aad u qiimeeyeen falanqeeyayaasha. Dhammaan saddexda kayd ayaa gaadhay koritaan la taaban karo sannadka 2020 waxayna diyaar u yihiin inay sii wadaan fuulitaanka. Shirkadda Ciyaaraha Qaranka ee Pennsylvania (PENN) Marka hore, waxaan iska leennahay Shirkadda Ciyaaraha Qaranka ee Pennsylvania, oo iska leh oo ka shaqeysa goobaha ciyaaraha iyo tartanka iyo ganacsiyada garoonka fiinaalka ee fiidiyoowga Mareykanka. Magaca ayaa kor u kacay 146% sanadba sanadka ka dambeeya, laakiin qaar ka mid ah falanqeeyayaasha Wall Street ayaa aaminsan in wali shidaal badan uu yaalo haanta. PENN waxay dhawaan shaacisay natiijooyinkeedii rubac saddexaad kahor, taas oo dhaaftay filashooyinkii. Shirkaddu waxay rajeyneysaa faa iidooyinka faa iidada ee rubuca inay kordhaan in ka badan 900 oo dhibco aasaasi ah, isla markaana EBITDAR la hagaajiyay ayaa kori doona 5% sanadkiiba, xitaa haddii dakhligu hoos u dhaco 10% sanadkiiba. Falanqeeyaha shanta xiddigle ah ee Joseph Greff ayaa macaamiisha u sheegay in "JP Morgan Chase" uu yiri: "Soo kabashada warshadaha ciyaaraha gobolka bishii Maajo / Juun ayaa sii socday illaa rubuc saddexaad, dakhliguna wuu ka fiicnaaday sidii la filayay. Mar alla markii la xakameynayo dalabka Kadib ku soo noqoshada caadiga, iyo tan iyo markii waxtarka hore ee COVID uu soo fiicnaaday, kharashyada hawlgalka si dhib yar / ma fuulan. Waxaan hore u qaadanay in heerka kobaca uu hoos u dhacay. ” Markuu intaas yiri, Greif wuxuu qirey in marka la fiiriyo waxqabadka qiimaha saamiga saamiga leh, qaar falanqeeyayaal kale ah ay ka haraan hoos u dhaca ". Si kastaba ha noqotee, wuxuu weli aaminsan yahay "qiimaha iyo dhiirrigelinta mustaqbalka". Falanqeeyayaashu waxay faallo ka bixiyeen: “… Waxaa jira isjiid jiid dagaal xagga dareenka maalgashadayaasha. Waxaan aaminsanahay inay tani caafimaad u tahay kaydka waxayna ugu dhowdahay lagama maarmaanka u ah kaydku inuu sii kordho; waxaan aaminsanahay in maal-gashadayaasha sinnaanta dhaqanka aan gebi ahaanba la xoogaysan. Waxaan aaminsanahay in maalgashadayaashu ay ka shakisan yihiin awooda PENN ee la tartanka Qabyooyinka, Fanduel, Caesars Entertainment, MGM / GVC, iwm. Qiyaasta isku dheelitirka PENN waxay maalgelin kartaa kharashaadka soo iibsiga macaamiisha isboorti hore, laakiin waxaan aaminsanahay, Marka la eego in sinnaanta dhow aruurinta ayaa soo aruurisay $ 950 milyan, halista tartankan waxaa lagu yareeyay inta u dhexeysa. Tan ugu muhiimsan, PENN waxay dhowaan ka bilaabatay barnaamijka sharadka Barstool Sports ee Pennsylvania. Greff wuxuu ugu yeeray sii deyntan hore "dhiirigelin marka la eego mugga iyo kharashka suuqgeynta," waxayna caddeysay "suurtagalnimada qaab gaar ah oo lagu helo saami." Intaas waxaa sii dheer, xawaaraha Barstool Sportsbook ayaa sii kordhaya. Muhiimad ahaan, Greff wuxuu rumeysan yahay in sharadka isboortiga ee hadda jira iyo deegaanka iGaming ay la mid yihiin kororka suuqyada gobollada 1990-yadii, markii dowlad-goboleedyada miisaaniyaddu ka liidato ay u weecdeen ilo dakhli oo cusub, sida ciyaaraha webiga si ay uga caawiyaan daboolidda miisaaniyadooda. dhimis. Arrintan, falanqeeyaha wuxuu yiri: “Waxaan aaminsanahay in gobol kasta uu leeyahay ku dhowaad isla filashooyinka USSB iyo iGaming, PENN-na wuxuu ka mid noqon doonaa guuleystayaasha. Waxaan jecel nahay ciyaaraha dhulka / sharadka isboortiga / qaabka iGaming ee Mareykanka oo aan aragno qolka koritaanka. . ” Hagaag, layaab malahan inuu Qabri la joogo Dibida. Marka lagu daro bixinta “miisaan aad u culus”, wuxuu sidoo kale dejiyay bartilmaameed qiimo ah oo ah $ 83 saamiga. Haddii hadafkan la gaaro laba iyo tobanka bilood ee soo socda gudaheeda, maalgashadayaasha waxaa laga yaabaa inay helaan 32% soo celin. (Si aad u daawato diiwaanka raadraaca ee Greif, guji halkan.) Waa maxay inta kale ee Wall Street leedahay? Sagaal iibsi, seddex heysasho iyo hal iibin ayaa la soo saaray seddexdii bilood ee la soo dhaafay. Natiija ahaan, PENN waxay heshay qiimeyn la isku raacsan yahay "dhexdhexaad iibsasho". Iyadoo lagu saleynayo celceliska bartilmaameedka qiimaha $ 76.77, qiimaha saamiyada ayaa laga yaabaa inuu kordho 22% sanadka soo socda. (Eeg falanqaynta keydka ciyaaraha ee Penn National TipRanks.) Redfin (RDFN) Redfin waxay kubilaabatay goob raadinta ku saleysan khariidad waxayna balaarisay kala duwanaanta alaabteeda si ay uga dhigto ciyaaraha qoyska, kulamada ugu horeeya iyo martigalinta howlaha si deg deg ah oo fudud. On Street Street, dadka qaarkiis waxay u maleynayaan in magaca uusan ku saabsaneyn kor u kaca dalabka COVID, iyo faa'iidadiisa sanadka ee 113% waa bilow. In kasta oo RDFN ay ka takhalustay saadaasha saddex-meelood meel xooggan, maalgashadayaashu xoogaa way ka niyad jabeen natiijada. BTIG's Jake Fuller ayaa tilmaamay in sicirka saamiyada uu dhici karo sababtoo ah "filashooyinka ayaa sareeya oo kororka dhexdhexaadka ah ee qiyaasta dakhliga waa qiyaastii 2%" iyo "Maalgashadayaasha xawaareynaya waxay u muuqdaan inay abaalmarinayaan qaafiyad hogaamineysa, halka RDFN ay dhab ahaantii ka dambeyso rajadan." Fuller wuxuu rumeysan yahay in RDFN aysan diiradda saarin dareenka dad badan, taas oo muujineysa in maalgashadayaashu aysan arki karin shaacinta dakhliga. Si kastaba ha noqotee, wuxuu u maleynayaa in Wall Street laga yaabo inay seegto qaybta muhiimka ah ee halxiraalaha. Falanqeeyaha shan-xiddiglaha ah ayaa yiri: "Waxa halkaan laga indha tiri karo ayaa ah in RDFN ay kordhisay heerka guddiga iyadoon wax saameyn ah ku yeelan sicirka beddelka, taasoo si weyn kor ugu qaadi doonta aragtida guud ee faa'iidada guud ee RDFN." Ujeeddadaas, wuxuu doonaa 2021 macaashka guud ayaa la filayaa inuu kordho 47%. Si dhow u fiirinta macluumaadka faahfaahsan rubuca, RDFN waxay la kulantay baahi xoog leh iyo dakhliga adeegyada guryaha ayaa kordhay 36% sanadkiiba. Wareegtada websaydhada iyo macaamilka macaamil ganacsi ayaa sidoo kale kordhay bil-bil-bil ah. Si kastaba ha noqotee, waa in la ogaadaa in kor u kaca uu ku socdo dakhliga macaamil kasta. Fuller ayaa yiri: "Tani waa muhiim maxaa yeelay waxay muujineysaa in heerka komishanka la filayo uu ugu dambeyn wax ku biirin doono." “Sida ku cad tirakoobkeena, dakhliga adeegyada guryaha wuxuu ka yimid 1.68% ee GTV seddexdii bilood ee seddexaad ee 2019 iyo rubuca labaad ee 2020 1.78% wuxuu kordhay iyadoo lagu qiyaasay 1.85% rubuca seddexaad ee sanadka 2020. Farqi afar-dhibic sare ah ayaa muujinaya taraafikada meelahaan. In kasta oo ay adagtahay in la qiimeeyo adkeysiga dalabka, sicirka oo kordha iyo faa iidooyinka ugu fiican waa inay ahaadaan kuwo waara ”Fowler ayaa faallo ka bixiyay. Iyadoo la raacayo rajadiisa, Fuller wuxuu taageeray dibiyada, isagoo ku celceliyay qiimeyn iibsi iyo bartilmaameed bartilmaameed oo ah $ 65. Hadafkani wuxuu muujinayaa kalsoonida uu ku qabo awoodda RDFN inay kordhiso 45% sanadka soo socda. (Si aad u aragto diiwaanka raadraaca Fuller, guji halkan.) Markii aad u guureyso qeybaha kale ee Wall Street, fikradaha ayaa xitaa ka sii qeybsamay. Saddexdii bilood ee la soo dhaafay, 6 wax iibsi, 5 heysasho iyo 1 iibin ayaa loo qoondeeyay. Sida laga soo xigtay Wall Street, RDFN waa iibsi dhexdhexaad ah. Celceliska bartilmaameedka qiimaha $ 50 macnaheedu waa 11% kor u kac. (Fiiri falanqaynta saamiyada Redfin ee TipRanks) Vertiv Holdings (VRT) Maadaama ay tahay mid ka mid ah hormoodka qalabka adduunka, softiweerka iyo adeeg bixiyeyaasha, Vertiv Holdings waxay gacan ka geysatay kor u qaadista suuqa iskuxiran ee nidaamyada dhijitaalka ah, kaas oo tiro aad u badan oo lama huraan ah Xogtu u baahan tahay la isugu gudbiyo, la falanqeeyo, laga baaraandego loona kaydiyo. Wall Street ayaa sheegtay inay kor u kacday 71% illaa iyo sanadkaan, waxaana laga yaabaa inay jiraan guulo intaa ka badan. Xitaa haddii sicirka saamigu aad kor ugu kaco, falanqeeyaha cilmi baarista Wolfe Nigel Coe ayaa wali aaminsan in xaaladda halista / abaalmarinta ay wanaagsan tahay. Wuxuu sharraxay: "Waxaan aaminsanahay in Vertiv uu yahay nooc naadir ah oo soo jiidan kara maalgashadeyaal fara badan: shirkad dhexdhexaad ah oo kobcisa oo bixin karta koror faa'iido soo jiidasho leh oo qiimo dhimis ah isla markaana ay mas'uul ka tahay koox fulin sare ah." Marka laga hadlayo VRT Wadada koritaanka, suuqyadeeda ugu dambeeya waa xarumaha xogta iyo isgaarsiinta. Meelahan waa aagagga ay Coe rajeyneyso inay ku guuleysato kobaca 2020 iyo 2021, iyo sidoo kale faa'iido-darrooyinka muddada-dheer ee muddada-dheer ee ay keeneen kororka isdaba-joogga ah ee xoojinta xogta iyo casriyeynta 5G. Intaa waxaa dheer, oo ay keeneen dadaallo lagu ilaalinayo kharashyada joogtada ah iyada oo loo marayo casriyeyn hawlgallo kala duwan iyo yareynta kakanaanta isku-dhafka, maamulku wuxuu sharraxay hab lagu ballaariyo faa'iidooyinka illaa 500 oo ah saldhigyo aasaasi ah. "Tani waa qoraal si guul leh u geeyay gudoomiyaha fulinta David Cote intii uu joogay Honeywell, taas oo naga dhaadhicinaysa in qoraallo isku mid ah la geyn karo Vertiv," ayuu yiri Cohen. Waxaa xusid mudan in VRT ay ka baxday rubuca labaad ee sanadka 2020, iyadoo deynta saafiga ah ee ku dhow US $ 2.1 bilyan iyo deynta saafiga ah / EBITDA ay gaareyso 4.2 jeer. Xitaa dhamaadka sare ee kala duwanaantaan, Coe wuxuu aaminsan yahay in xaashida dheelitirka ay dhaqso u tirtiri karto. Ujeedadaas, wuxuu u maleynayaa in sanadka 2023 saamiga deynta / EBITDA uu laba jeer yahay, ka dibna raasamaalka haray uu gaari doono 1 bilyan oo doolarka Mareykanka ah. “Waqtigan xaadirka ah uma maleyneynno in Vertiv ay tahay sheeko rasmi ah oo raasamaal ah, laakiin tan waxaa laga yaabaa inay soo shaac baxdo inta udhaxeysa 2022/23-dabcan waan arki karnaa dhaqdhaqaaqyada soo iibsiga si aan kor ugu qaadno awoodeeda dhanka awood qeybinta iyo lakabka DCIM Ikhtiyaarrada kale ee suurtogalka ah waxaa ka mid ah daadinta kaararka lacagta caddaanka ah (kuwan hadda waxay ka muuqdaan xisaabteenna tirinta saamiga la qasay) iyo habka loo qaybiyo macaashka, taas oo ballaarin doonta suurtagalnimada lahaanshaha hay'adeed. Sidoo kale ma iska indho tiri karno xaqiiqda ah in qalab badan oo koronto oo ballaadhan Baaxadda iskaashiga istiraatiijiyadeed ee ay aasaaseen ka qaybgalayaasha suuqa, ka qaybgalayaashu muhiimad muhiim ah kuma laha xarunta xogta. ” Wax walba oo VRT ah ayaa sameeyay inay ku qanciso Coe inuu ku celiyo qiimeynteeda ka sarreysa. Intii uu wicitaanada wacayay, wuxuu dejiyay bartilmaameed qiimo ah oo ah $ 23, taasoo muujineysa 22% macquul ah oo dhanka sare ah. (Si aad u aragto rikoodhka raadraaca Coe, guji halkan) Falanqeeyayaasha kale ma oggolaadaan? waxay yihiin. Saddexdii bilood ee la soo dhaafay, kaliya 4 qiimeyn "iibso" oo sax ah ayaa la daabacay. Sidaa darteed, farriintu way cadahay: VRT waa iibsi xoog leh. Maaddaama celceliska bartilmaameedka bartilmaameedku yahay $ 20.75, qiimaha saamiga ayaa laga yaabaa inuu kordho 10% sanadka soo socda. (Eeg falanqaynta keydka Vertiv Holdings ee TipRanks) Afeef: Aragtida lagu muujiyey qodobkaan waa kuwa kaliya ee falanqeeyaha ugu weyn. Mawduucu waa tixraac keliya. Kahor intaadan sameynin wax maalgashi ah, waxaa aad muhiim u ah inaad sameyso falanqeyn adiga kuu gaar ah.
Dakhliga ugu weyn ee toddobaadkan iyo warbixinta xogta dhaqaalaha ayaa la sii deyn doonaa dhammaadka toddobaadkan, iyo inta badan saamiyada FAANG ayaa la soo sheegaa wixii ka dambeeya Khamiista.
Toddobaadkii dhammaaday Oktoobar 22, sicirka dulsaarka amaahda ayaa hoos ugu dhacay diiwaanka hoose. Waxaa la filayaa in COVID-19 iyo siyaasadda Mareykanku ay saameyn ku sii yeelan doonto toddobaadkan.
Qaaciddada gaarka ah ee Suntory ee saliidda kalluunka "DHA & EPA + Sesame Ming E", 4 kaabsal maalintii, waxay baabiin kartaa dhibaatada wadnaha iyo xididdada, waxay soo celin kartaa firfircoonida beerka, hurdo qoto dheer ayey noqon kartaa, waxayna noqon kartaa qodob khatar ku ah magaalooyinka! 10% off waqti xaddidan, ha moogaan!
AMD (AMD) warbixinteeda dakhliga seddex-meelood meel ayaa loo qorsheeyay in lasii daayo ka dib marka la xiro Talaadada, taas oo ah waqti xiiso u leh warshadaha semiconductor. The Wall Street Journal ayaa soo warisay in AMD (AMD) ay qorsheyneyso inay si firfircoon u ballaariso ganacsigeeda iyada oo loo marayo helitaanka suurtagalka ah (XLNX) (XLNX). Isla mar ahaantaana, tartamihiisa ugu weyn (INTC) wuxuu si adag u shaqeynayay si uu u sii wado soo saarida teknoolojiyada wax soo saarka horumarsan ee looga baahan yahay soosaarida semiconductors tayo sare leh.
* Sheekada xiisaha leh ee Barron ee usbuucan waxay sahmineysaa rajada kooxaha waaweyn ee cabitaanka sharafta leh ee adduunka musiibada kadib. * Maqaallo kale oo muuqaal ah ayaa ka hadlaya kor u kaca ku yimid saamiyada suuqyada soo koraya iyo halka laga helayo dakhliga korantada. * Intaa waxaa sii dheer, waxaa jira rajo ah aaminaadaha maalgashiga guryaha ee caafimaadka, kuwa ka shaqeeya dukaamada waaweyn, iyo tikniyoolajiyadda xuddun u leh kansarka. Sheekada daboolka ah ee Andrew Bary ee “Maxay Coca-Cola u soo muuqan doontaa” waxay muujineysaa in shirkadda dhibaatada ugu badan ka soo gaadhay cudurka faafa ay tahay Coca-Cola (NYSE: KO). Si kastaba ha noqotee, markay dadku caadi ku soo noqdaan adduunka tallaalka, saamaynta caalamiga ah ee shirkadda weyn ee cabbitaanka waddammada ayaa ka dhigi karta inay sare ugu kacdo heerar cusub. Reshma Kapadia "Saamiyadooda suuqa ee soo ifbaxaya waxay la tartami karaan shirkadaha waaweyn ee teknoolojiyadda Mareykanka", ayuu yiri, ka dib toban sano oo uu hoos u dhacay, saamiyada suuqa ee soo kordhaya ayaa sare u kacaya. Shirkado badan oo internetka iyo daryeelka caafimaadka ah oo ku yaal suuqyada dibedda ayaa wali ku jira waddada koritaanka, iyagoo siinaya fursado aad u ballaaran. Miyuu Alibaba Group Holdings Limited (NYSE: BABA) mudan yahay in la arko? "Saddex Lacagood oo Aaminaad Caafimaad ah si ay dib ugulaabtaan Goobta Daryeelka Caafimaadka", Darren Fonda (Darren Fonda) wuxuu caddeeyay in shirkadaha aaminaadda maalgashiga guryaha ee ku takhasusay xarumaha daryeelka caafimaad ay leeyihiin boos koritaan. Soo ogow waxa Barron ka jecel yahay Dhakhaatiirta Realty Trust (NYSE: DOC) iyo dhowr asxaabtiisa ah. NextEraEnergy Inc. (NYSE: NEE) ayaa kor u kacay 26% sanadkan, sida ku cad "8 si loo helo keyd badbaado leh" iyo horumarka joogtada ah ee wax soo saarka ", qoraaga: Lawrence · C · Strauss (Lawrence C. Strauss). Laakiin meelo kale oo ka mid ah qaybta adeegga, ma jiraan wax soo saar hoos u dhac ah iyo qaar ka mid ah tallaabooyinka ilaalinta hoos u dhaca. Xcel Energy Inc. (NYSE: XEL) waa mid ka mid ah xulashooyinka Barron. In Eric Savitz ku leeyahay “Ha Ka Tegin Keydadka Teknolojiyada Weyn. "Walwalku waa la buunbuuniyay", sababta loo ogaaday in xitaa haddii tuhunku ka dhasho hoos u eegista sharciyeed ee sii kordheysa ee adag, sababaha wali waa Apple (NASDAQ: AAPL) iyo Microsoft (NASDAQ: MSFT)) Shirkaduhu waxay cusbooneysiinayeen oo ay fulinayeen, halkii ka been iyo khiyaanayn. Sidoo kale eeg: Suuqa dibida ee Benzinga ee toddobaadkan: Boeing, Netflix, Pfizer, iwm. Jack Hough wuxuu tilmaamay “Raadinta fasax u Dukaameysi been abuur ah”, wuxuu ka hadlay sababta Nofeembar u noqon karto waqtiga saxda ah ee lagu iibiyo khasaaraha canshuurta, sida Kohl's Corp. (NYSE: KSS) iyo Macy's Inc. (NYSE: M). Nike (NYSE: NKE)? Marka hore, Suuqa Beeraleyda 'Sprout' (NASDAQ: SFM) wuxuu ahaa kii ku guuleystay COVID-19, ka dibna wuxuu ku khasaaray COVID-19. Sidaa darteed, Teresa Rivas ee "Sprout Inventory waa diyaar soo celin wanaagsan." Ka dib markii ay lumisay ku dhowaad rubuc ka mid ah qiimaheeda seddexdii bilood ee la soo dhaafay, miyaa la filayaa inuu dib u soo kabto sariirta dukaanka ee ku saleysan Phoenix? In "rajo wanaagsan oo ku saabsan Tesla, telemedicine iyo genomics Revolution" In, Emily Liu ayaa la wadaagtay sababta maalgashiga shirkadda ARK uu u yahay arday hal-abuurnimo carqaladeyn ah, sababta Tesla (NASDAQ: TSLA) uga tagi doono Uber Technologies Inc. (NYSE: UBER) iyo boodhka la deggan yahay dadka kale. Bill Alper Bill Alpert's "Shirka Kansarka waxaa laga yaabaa inuu indho sarcaad ku sameeyo keydka cilmiga farsamada." Dood cilmiyeedkan ENA ee sannadkan, cilmi baarayaasha kansarku waxay ku qabteen kulan khadka tooska ah si ay u eegaan xog cusub oo ku saabsan dawooyinka ay tijaabiyaan shirkado badan oo biotech ah. Wax ka baro Barron Maxaad ugu maleyneysaa in Mirati Therapeutics Inc. (NASDAQ: MRTX) ay noqon doonto mid ka mid ah shirkadaha loogu daawashada badan yahay. Toddobaadkan Barron toddobaadle: * Immisa ayaad ku bixin doontaa iyadoo la raacayo kharashka canshuuraha ee Biden iyo Trump * Sida qorshaha canshuuraha ee musharraxa madaxweynenimada u caawin doono iyo u dhaawaceyso dhaqaalaha - waxa mowjadda buluugga ahi uga dhigan tahay suuqa dammaanadda caqabad ku ah maalgashadayaasha * Waa maxay sababta qiimeynta warshadaha tikniyoolajiyadda sare ay mudan yihiin in la daawado * Diesel Maxaa tilmaamaya in suuqa uu u diri karo dhaqaalaha * Dagaalka ka socda dagaalka baabuurta korantada ee soo socota * Dib u soo kabashada culeysyada leh ayaa ah * Xiriirka Shiinaha ma u yahay ammaan sida bonds qaran * Ma yahay Waa waqtigii la isku dayi lahaa suuqa saamiyada Thai Waqtiga qorista, qoraagu wuxuu ku jiraa saamiyada kor ku xusan Ma jiro boos. Raac Benzinga barta Twitter-ka wixii warar ah ee ugu dambeeyay iyo fikradaha ganacsiga. Ka eeg macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan Benzinga * Halkan guji si aad u aragto ikhtiyaarka ikhtiyaariga Benzinga * Suuqa dibedda ee Benzinga toddobaadkan: Boeing, Netflix, Pfizer iwm. * Soo iibsigii caanka ahaa ee isbuucii hore: Carnival, Citigroup iyo in ka badan (C) 20 20 Benzinga.com. Benzinga ma bixiso talo maalgashi. Xuquuqda daabacaadu way xifdisan
Trifecta Stocks ayaa aqoonsan doonta saamiyada culayska badan Arbacada, waxaana laga yaabaa inay jiraan fursado maalgashi oo xiiso leh muddada gaaban. Iyadoo la adeegsanayo falanqaynta farsamada jaantusyadan saamiyada ah, iyo halka ay ku habboon tahay, iyadoo lagu saleynayo falalka iyo qiimeyntii ugu dambeysay ee TheStreet's Quant Ratings, waxaan ka reebnay shanta magac. In kasta oo aynaan tixgelin doonin falanqaynta aasaasiga ah, waxaan rajeyneynaa in qodobkan uu siin doono maalgashadayaasha daneynaya kaydka bar bilow wanaagsan oo shaqada guriga ah oo dheeraad ah magaca.
Dambaska ku daadi badda ama beero lagu xasuusto si dambaska loogu tuuro hab deegaan ahaan u habboon oo waara. Horay u sii qorshee, oo u sheeg qoyskaaga waxa aad rabto, oo iska diiwaangeli Diiwaanka Dhexe ee Aaska Cagaaran.
Shirkadda weyn ee hawlgabka ee PGGM ayaa labanlaabtay maalgashigeeda saamiyada PayPal waxayna iibsatay saamiyada Cisco iyo Activision rubucii saddexaad. Waxay jartay saamigii Qualcomm.
Aasaasaha Alibaba Jack Ma ayaa Sabtidii sheegay in liistada laba-geesoodka ah ee shirkadda weyn ee Fintech ee Ant Group ay noqon doonto tan ugu weyn adduunka iyadoo lagu saleynayo sicirka go'an habeenka Jimcaha. Wuxuu ka yiri shirkii Bund-ka ee Xarunta Maaliyadeed ee Bariga ee New York: "Tani waa markii ugu horreysay ee qiimeynta liis ballaaran oo taariikhda aadanaha ah lagu go'aamiyo meel ka baxsan magaalada New York." Iyada oo taageero ka heleysa shirkadda weyn ee e-commerce ee Shiinaha ee Alibaba, Ant ayaa qorsheyneysa Waxaa lagu qori doonaa suuqa STAR ee Hong Kong iyo Shanghai inta lagu jiro usbuuca.
PayPal furitaanka shabakadeeda Bitcoin iyo cryptocurrencies waxay badali doontaa sharciyada ciyaarta, laakiin warkan wuxuu qarinayaa farriin ka weyn oo muhiim ah.
Hang Seng sanadka cusub ee canshuurta laga jari karo wuxuu bixiyaa 10 sano oo dakhli go'an oo dheeri ah wuxuuna damaanad qaadayaa 1.73% -2% dib udajinta dakhliga gudaha. Waxay qaadataa oo keliya 10 daqiiqo in lagu dalbado caymiska khadka tooska ah isla markaana wax looga qabto isla markaaba.
Saami-qaybsiga iyo faa iidadu ma aha sababaha ugu muhiimsan ee maal-gashadayaashu u iibsadaan ama u joogaan shirkadaha shidaalka. In kasta oo soo noqoshada ay wali tahay furaha, maalgashadayaashu wali waxay dalbanayaan isbedel kahor 2020
Leon Blo, arrimuhu way ka sii darayaan. Toddobaadkii la soo dhaafey, shirkadda weyn ee maalgashiga ee Black, Apollo Global Management Inc. (Apollo Global Management Inc.) waxay la kulantay hal dhibaato midba midka kale ka dib, taas oo ah, isaga iyo dembiilaha galmada la xukumay Jeffrey Epstein (Jeffrey Epstein) Madaxweyne Xiriirka tobannaan sano Guddigiisa agaasimayaasha ayaa amar ku bixiyay dib u eegis dibedda ah in Black laftiisa. Kadib sanduuqa hawlgabka ee Pennsylvania wuxuu hakiyay maalgashiyo cusub-Connecticut ayaa sidaas oo kale sameeyay. Mid ka mid ah la-taliyeyaasha weyn - ilaaliyaha oo fulinaya $ 160 bilyan oo maal-galiye ayaa ku boorriyay macaamiisha inay dib u dhigaan, halka mid kalena uu ka fiirsanayo tallaabo la mid ah. Macaamiisha ku raaxeysanayay dakhliga ugu fiican ee Wall Street sannado badan ayaa dib uga fiirsanaya xiriirka ay la leeyihiin Apollo. Horaantii bishaan, warbixin ka soo baxday New York Times ayaa ka xanaajisay dib-u-baaris Epstein. Maxwell (Ghislaine Maxwell) lama shaabadeeyo oo lama siiyo feejignaan cusub. Sida laga soo xigtay dadka aqoonta u leh arinta, macaamiisha qaarkood ma rumeysna in dib u eegista ay sameysay shirkadda qareenka ee Dechert LLP ay ku filan tahay in la nadiifiyo magaca Black, qaboojinta lacagaha cusubna waxay dhibaato u keeni kartaa Apollo inta ay isku dayayso inay sii wado. U aruuri $ 20 bilyan dhowr maaliyadood oo cusub. Qalalaasaha aafada ah ee ka dhashay suuqa amaahda ayaa ah fursadda ugu weyn ee maalgashi ee shirkadda, oo caan ku ah iibsashada ganacsiyada dhibka badan. Dadkii aqoonta u lahaa arintaas ayaa sheegay bishii Abriil in Apollo uu doonayo inuu ka faa'iideysto jahwareerka suuqa isla markaana uu maalgashi ku sameeyo deynta gaarka loo leeyahay. Dhibaatooyinka sii kordhaya ee madow waxay ka tarjumayaan isbeddelada siyaasadeed ee adduunka maalgashiga, iyadoo lacagaha waaweyn ay noqdaan kuwo xasaasi u ah deegaanka iyo bulshada. Dowladnimaduna aad ayey muhiim u tahay. Ujeeddada cusubi waxay ka dhigan tahay in xitaa markii lagu dhex jiro fadeexado, xitaa rajada laga qabo soo-celinta faa'iido leh aysan noqon karin mid soo jiidasho leh oo ku filan. “In kasta oo waxqabadka had iyo jeer uu noqon doono qodob muhiim ah, haddana ma aha qodobka keliya,” ayuu yiri Gerald O’Hara, oo ah falanqeeye ka tirsan shirkadda Jefferies Financial Group Inc .. “Siyaabaha qaarkood, waxaan diyaar u nahay inaan u hurno waxqabadka si wanaagsan oo aan wax u qabanno. shirkadda anshaxa. ” Bloomberg ayaa soo warisay jimcihii in la taliyaha maalgashiga Aksia uu macaamiisha u sheegay inaysan lacag ku darin Apollo. Connecticut waxay sheegtay inay joojinayso maalgashiga cusub ee shirkadda. Horraantii toddobaadkan, Nidaamka Hawlgabka ee Shaqaalaha Dugsiyada Dadweynaha Pennsylvania ayaa sheegay inuu si ku-meel-gaadh ah u joojinayo maalgashiga dheeraadka ah ee Apollo, lataliyaha Cambridge Associates ayaa ka fiirsanaya inuusan shirkadda kula talin macaamiisha hawlgabka iyo hawlgabka. Marka laga hadlayo wararka sheegaya in Epstein la xiray sanadkii la soo dhaafay, welwelka maalgashadayaasha ayaa dib loogu soo celiyay warbixinta New York Times. Kadib markii lagu xukumay inuu shaqaaleysiiyay gabar yar oo jirkeeda ka ganacsata 2008, wuxuu ugu yaraan 50 milyan u diray Epstein. Dollar. Maqaalka kuma eedeyn Black inuu sharciga jabiyay. Tan iyo markii sheekada la daabacay Oktoobar 12, qiimaha saamiyada Apollo ayaa hoos u dhacay ilaa 12%. "Waxaan si adag u ballanqaadeynaa inaan horumarinno daahfurnaanta," Apollo ayaa ku yiri hadal uu soo saaray jimcihii, isagoo xusay in Black uu si joogto ah ula xiriiri jiray maalgashadayaasha. In kasta oo Apollo uusan waligii ganacsi la samaynin Jeffrey Epstein, Leon wuxuu codsaday dib u eegis dibadeed oo madax bannaan oo ku saabsan xiriirkiisii ​​hore ee xirfadlaha ahaa ee uu la lahaa Mr. Epstein. ” Black ayaa u sheegay Apollo bishan warqad ka socota lamaanaha xaddidan ayaa lagu sheegay inuu si qoto dheer uga xumaaday ku lug lahaanshaha Epstein. . Black wuxuu caddeeyay inuu isaga u soo jeestay xagga canshuuraha, qorsheynta guryaha iyo arrimaha samafalka, mana jiraan wax ku jira warbixinta New York Times oo ka hor imaanaysa sharaxaadihii hore ee xiriirkiisa. Dheeraad ah: Leon Black's Epstein wuxuu xiriir la leeyahay olole lacag ururin ah oo halis ku ah maalgashadayaasha Apollo gebi ahaanba waa laga gooyey Apollo maxaa yeelay maalgalinta hantida gaarka loo leeyahay badanaa waxay xirtaa raasamaalka sanado badan-dad badan ayaa diyaar u ah inay helaan dib u soo celin sare Iyadoo loo eegayo miisaanka culeyska. Saddexda maal-galiye, oo aan rabin in magacooda la shaaciyo, ayaa sheegay in haddii natiijooyinka baaritaanka ay noqdaan kuwo laga xumaado, macaamiisha ay aakhirka dooran karaan inay meelo kale raadsadaan. Marka la eego soo noqoshada deeqsinimada leh ee shirkadda, ka bixitaanka macaamiisha ayaa si gaar ah u soo jiidasho leh. Bloomberg ayaa soo warisay bishii Janaayo in Apollo sanduuqiisa hantida gaarka loo leeyahay loo furay maalgashadayaasha 2001, iyadoo sanadkii la soo saaro 44%, laakiin xitaa maalgashadayaasha doonaya inay maalgashadaan lacag badan maalgashiga gaarka ah waxay lahaan doonaan soo laabasho May waxay dooran kartaa inay u wareejiso kuwa kale meelaha. Wada-hawlgalayaasha Sarah Sandstrom (Sarah Sandstrom) waxay tiri: “Tani waa tartan caasimad ah oo aad u tartan badan, waana sii wadaynaa inaan wax ku aragno hannaanka lacag-ururinta. Arrinku waxa weeye, siyaabo badan, way uga badan tahay geeddi-socodka siyaasadeed, ee maaha hannaan qaadhaan ururin. ” Xarunta Campbell Lutyens, shirkaddu waxay ka caawisaa shirkadaha gaarka loo leeyahay inay lacag ururiyaan. Waxaad ka sheekeyneysaa sheekadaada oo waxaad dhiseysaa xiriir aad la leedahay maalgashadayaasha. ” (Faallooyinkii hore ee Blake ee lagu daray faqradda 12aad.) Qoraallada noocaas ah, fadlan booqo Bloomberg.com oo hadda iska qor ilaha wararka ganacsiga ee aad loogu kalsoon yahay. © 2020 Diiwaanada Bloomberg
Hawlgab ma noqon karto welwelka dhalinyarada badankood, laakiin waa inay noqotaa. Tani waa sababta oo ah ka dib tobanaan sano markii la isku daray, maalgashiyada yar yar ee maanta ayaa lagu kordhin karaa qaddar badan mustaqbalka. Roth IRA waa bar bilow wanaagsan.